ကယား တိုင်းရင်းသားတချို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ ပျောက်ကွယ်လု ဖြစ်နေ | ဧရာဝတီ
ကယား တိုင်းရင်းသားတချို့၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုများ ပျောက်ကွယ်လု ဖြစ်နေ
ဇွဲထက်| January 18, 2013 | Hits:1,300
| | ကယန်း(ပဒေါင်) တိုင်းရင်းသူ တဦး ရိုးရာ ဂျပ်ခုတ်အထည် ယက်လုပ် နေစဉ်(ဓာတ်ပုံ – ကောင်းညီဟန်/ဧရာဝတီ)
ကယား ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုတချို့၏ ယဉ်ကျေးမှုနှင့် ဓလေ့ထုံးတမ်းများ ပျောက်ကွယ်လု နီးပါး ရှိနေကြောင်း ယင်း တိုင်းရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ က ပြောသည်။
ကယား ပြည်နယ်တွင် ကယား၊ ဇယိမ်း၊ ကယန်း (ပဒေါင်)၊ ဂေခို၊ ဂေဘား၊ ပရဲ (ကယော)၊ မနူးမနော်၊ ယင်းတလဲ၊ ယင်းဘော် စသည့် လူမျိုးစုများ နေထိုင်လျက်ရှိပြီး ကယား (ဒူးကြီး)၊ ကယန်း (ပဒေါင်)၊ ဂေခို၊ ဂေဘား တိုင်ရင်းသား မျိုးနွယ်စုတို့ ၏ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ ပျောက်ကွယ်လုနီးပါး ဖြစ်နေကြောင်း သိရသည်။
“ပျောက်ကွယ်သွားမှာ စိုးရိမ် ရတယ်။ အစားထိုး စရာလည်း မရှိဘူး။ အလွယ်တကူ ၀ယ်လို့လည်း မရဘူး။ သူတို့ ၀တ်ထားတဲ့ ဟာတွေက သူတို့သေသွားရင် ထည့်ပေးလိုက်ရတာလေ။ မြို့နဲ့နီးတော့ ၀န်ကြီးက ၀တ်ခိုင်းတဲ့ အခါမှ ၀တ်တယ်”ဟု ကယန်းလူမျိုးများ ၀တ်ဆင်သည့် ကြေးကွင်းများနှင့် ပတ်သက်ပြီး လွိုင်ကော် မြို့နယ် အနီး ဆန်းဘွန်း ကျေးရွာမှ ကယန်း (ပဒေါင်) လူငယ် မူဟုန်းက ပြောသည်။
ကယန်း (ပဒေါင်) လူမျိုးများသည် ကယား ပြည်နယ် အတွင်း ဟိုဝမ်း၊ ဆောင်ဒူး၊ လိုပူး၊ ပန်ပက် ကျေးရွာများတွင် အများဆုံး နေ ထိုင်ကြပြီး လွိုင်ကော်မြို့နယ်အနီး ဆန်းဘွန်းကျေးရွာကိုမူ လွန်ခဲ့သည့် နှစ်ပေါင်း ၃၀ လောက်က စတင် တည်ထောင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
လည်ပင်းတွင် ကြေးကွင်း စွပ်ကြသည့် ကယန်း (ပဒေါင်) တိုင်းရင်းသားများ ၏ ရိုးရာ ၀တ်စုံများသည် ယနေ့လူငယ်များ အတွက် ခေတ်နှင့် ဆီလျော်မှု မရှိခြင်း၊ ရိုးရာဝတ်စုံ အတွက် အလွယ်တကူ ၀ယ်ယူ၍ မရနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့် ခေတ်သစ် ၀တ်စုံကိုသာ ၀တ်ဆင် ကြသည်ကို တွေ့ရသည်။
“ကျနော်တို့ ဒေသမှာ ရှိတဲ့ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာတွေ ပျောက်ကွယ်ဖို့ ရှိနေတယ်။ ဒေသမှာ ရှိတဲ့ အဖွဲ့အစည်း အားလုံး အပေါ်မှာ တာဝန်ရှိသလို အစိုးရမှာလည်း တာဝန်ရှိတယ်”ဟု ကယားပြည်နယ် ၈၈ မျိုးဆက် လူမှုအကျိုးပြု ကွန် ရက်မှ ကိုဖိုးခွား က ပြောသည်။
တိုင်ရင်းသားများ ၏ အခွင့်အရေး နှင့် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ ပြန်လည် ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် အတွက် ကယားပြည်နယ်ကို ကရင်နီပြည်နယ်ဟု ပြန်လည်ခေါ်ဆို သတ်မှတ်ခြင်းသည် အဓိက ကျကြောင်း၊ ယင်း တိုင်ရင်းသား မျိုးနွယ်စုများ၏ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ မပျောက်ကွယ်ရေးအတွက် အစိုးက အထောက်အပံ့ပေးရန် လိုအပ်ကြောင်းလည်း ကယား ပြည်နယ်တွင် နေထိုင်ကြသည့် တိုင်းရင်းသား တချို့က ပြောဆိုသည်။
“လူမျိုးတိုင်းမှာ ကိုယ့်ရဲ့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုတွေ ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းရန် ရှိသလို၊ ခေတ်မမီ တော့တဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုတွေ၊ နေ ရထိုင်ရ ခတ်တဲ့ ၀တ်စား ဆင်ယင်မှုတွေ အားတော့ မပေးဘူး”ဟု ကယန်း စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု ဗဟိုကော်မတီ အထူးအကြံပေး ဦးခူးယူဂျင်းက ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နိုင်ငံရေး အသိအမြင် ရှိသည့် မျိုးနွယ်စုများ တွင် ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း အစဉ်အလာများ၊ စာပေများ ပြန်လည် ထိန်း သိမ်းကြသော်လည်း တချို့ မျိုးနွယ်စုများသည် လုပ်ကိုင် စားသောက်ရန် လွယ်ကူသည့် နေရာများသို့ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ကြရ သည့် အတွက် ရှိရင်းစွဲ ရိုးရာ ယဉ်ကျေးမှုများ တစတစ ပျောက်ကွယ်ခဲ့ရကြောင်း သမိုင်း သုတေသီ တချို့က ဆိုသည်။
ယခင် စစ်အစိုးရလက်ထက်က မူဝါဖြစ်သည် ဒို့တာဝန် အရေး ၃ ပါး တွင် တိုင်ရင်းသား စည်းလုံး ညီညွတ်ရေး ဟု ပါဝင်သော် လည်း တိုင်ရင်းသား ရေးရာများနှင့် ဆိုင်သည့် ကိစ္စရပ်များကို ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်း ဆောင်ရွက်ရန် တိတိ ကျကျ တာဝန်ပေးထားခြင်း မရှိသေးကြောင်း ရခိုင် တိုင်းရင်းသားရေးရာ ၀န်ကြီး ဦးဇော်အေးမောင်က ပြောသည်။
Comment	You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Shwe Linyone January 18, 2013 - 9:22 am	Many Padaung people fled into Thailand. The Thai government is helping them with brand new village built for them. Tourists from many parts of the world come to the Padaung village. They are helped by the Thai government and in return, the Padaung people become attraction to the tourists who spendalot of money in Thailand. Reeds and islands help each other there. Padaung’s traditional food and beverage are favorite to the foreigners. Their long necks bring in bunch of foreign currencies to Thailand. One Padaung man said, “Burmas is hell but Thailand is heaven”. We need to think seriously what he meant. Why do we turn our beautiful country into HELL?
Reply	ဗမာ January 18, 2013 - 5:04 pm	Thanks, Shwe Linyone. Your comment and info is precious for our country. This is how we Feel. Our government don’t know how to care our own people but know how to bully and attack them. So sad!!
Reply	ဗမာ January 18, 2013 - 4:53 pm	တစ်ခါက စင်္ကာပူက Channel News Asia ရုပ်သံလှိုင်းမှာထုတ်လွှင့်သွားတာလေးအမှတ်ရလို့ပါ။ အစီအစဉ်က ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြောင်းပါ။ ရုတ်တရက် ကျုပ်တို့တိုင်းရင်းသား ကယန်း(ပဒေါင်)လူမျိုး အကြောင်းကိုအဲဒီအစီအစဉ်မှာတွေ့လိုက်လို့ အမှတ်တမဲ့ ကြည့်နေမိတယ်။ အဲဒီလူမျိုးတွေရဲ့ ပညာသင်ကြာရေးအကြောင်းပါလာလို့ပိုပြီး စိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ လားလား…သူတို့သင်နေတဲ့ စာတွေက ကျုပ်တို့မြန်မာစာ (ကကြီး၊ခကွေးတွေ) ဖြစ်နေပါရော့လား။ သြော်..ထိုင်းတွေ၊ထိုင်းတွေ…… ဒို့မြန်မာတိုင်းရင်းသားတွေကိုအသုံးချပြီး လုပ်စားနေပုံကတော့ ညက်ပါတယ်။ အေးလေ…ဒါပဲထင်ပါရဲ့.. မသိသူကျော်သွား သိသူဖော်စားဆိုတာ။
Reply	Chabalit January 18, 2013 - 8:21 pm	Hehe,They know how to ask money from foreingers too.One photo 50 baths,one photo 50 baths.So,they got baths.So thailand is heaven.hahaha.Yoe thar pay lo bal.